Home > Travel Europe > Eoropa Top tarehy Lamasinina
Tsy voatery ho Bollywood mpilalao mba tena mahita ny ao anatiny ireo tsara tarehy, tarehy fiarandalamby, fa ianao no tsy maintsy nametraka goavana chunk-bola manokana ho tia azy ireo. Raha efa nahazo £ 3 eo ho eo, 000+ mba hiantra, mifidy ny toerana itodiana, amboary ny entanao, ary avelao hanomboka ity traikefa amin'ny fiainana ity! Ny zava-drehetra mikasika izany mifangaro ny lafo vidy, fampiononana, ary be dia be ny Toerana mahafinaritra hizaha tany Eoropa hanao ho TSY HAY HADINOINA.
Ity ny mpitarika ny Eoropa ny telo malaza indrindra, tarehy fiarandalamby.
Ny fiaran-dalamby izay nampidirina dia lavitra ho an'izao tontolo izao ny fiarandalamby tafahoatra indray amin'ny 1982 dia mitovy ny fiaran-dalamby izay mbola laharana voalohany safidy maro ny Eoropa dia lavitra sy mirentirenty Lamasinina mpankafy. Noho izany, ho an'izay mijery mankafy haitraitra fiaran-dalamby mihoatra ny fampitahana, Venice Simplon Orient Express no fomba hanaovana izany. ny tena malaza dia ity tarehy afa-mandositra dia eo London sy Venice. Na izany aza, maro tsy afaka mandeha manohitra koa Istanbul sy Berlin, amin'ny Berlin ho ny farany nanomboka fijanonana fa ny fiaran-dalamby. Rehefa mitaingina ity lamasinina ity ianao, manana ny sasany amin'ireo tsara indrindra eran-chefs miasa eo amin'ny sakafo sy ny tokan-tena, ary nizara Suites izay 5-star fitaovana.
Miaraka amin'ny toeram-pisakafoanana sy fandraisam-bahiny fiara, misy tsara barany faritra ahitana faritra feno ho an'ny vahiny ... khm, mpandeha. Rehefa mieritreritra lakirema de lakirema ny tarehy fiarandalamby, Venice Simplon Orient Express no toerana ao an-tsainao avy hatrany mandeha!
Venice mba London tapakila ianao dia lany eo ho eo £ 2700. Ny mitaingina sendra manao 16 ora.
Belmond Royal Ekosey tarehy Lamasinina
Ny fiaran-dalamby izay tena velona mpanjaka ho amin'ny fomba amam-panao, Belmond Royal Ekosey no nofy tanteraka. Amin'ny maha eo an-tampon'ny 3 tarehy fiarandalamby, Belmond efa nanana lohahevitra lalana ianao tia. Anisan'izany Scotch Malt Whisky Trail, Toerana mahafinaritra Western Mahavariana, Ny Classic Ekosy Splendours, Dales Lakes & Gardens, ary maro hafa. Belmond mirehareha ny Spa tolotra, ihany koa! Ny 4 andro Highland Classicmost no malaza indrindra fitetezam-paritra. Ny fiaran-dalamby mikoriana avy amin'ny Aprily ho Oktobra, Ary maro mandrakotra tanteraka ny endriky ny Toerana mahafinaritra tsara tarehy, anisan'izany ny Nosy Skye. Mipetraka indray ary haka aina ny be varavarankely fitaratra, sip amin'ny sasany amin'ireo divay tsara indrindra ary nijininika ny noho ny hatsaran-tarehy izay Scotland.
Vidin'ny tapakila manomboka amin'ny £ 2.350 isan-olona.
Ny fiaran-dalamby Golden Eagle Danube Express
Na oviana na oviana ianao hiaina amin'ny fomba Eoropa ianao dia mandeha amin'ny Golden Eagle Danube Express. Ny fiaran-dalamby prides amin'ny tarehy mahagaga Suites, Deluxe sy ny lova cabins. Ihany koa izy ireo mirehareha ny trano fonenana sy ny trano fisakafoanana tsara indrindra bara fandraisam-bahiny eo amin'ny kodiarana. By lavitra iray amin'ireo indrindra tarehy fiarandalamby ve ianao ao amin'ny Golden mitaingina Eagle Danube Express tolotra 5 ny 12 andro nandehanany. Io dia miantoka ny isan'ny toerana ao anatin'izany Budapest, Prague, Zurich, Vienna, Venice, Istanbul, Innsbruck, Sofia, sy ny maro hafa. Misy ihany koa ny toerana hafa be (Tours) azo isafidianana. Eagle Golden rehetra nandehanany Danube Express ahitana eny-lamasinina Tours sy ny zavatra niainana.
Tickets fa ity iray ity avy amin'ny £ nanomboka 22.260 for Superior Deluxe Class.
A nankany Eoropa ahitana tarehy Lamasinina sy mankasitraka azy manokana efa tsara, fa nankany Eoropa na inona na inona ireo fiarandalamby dia ny zava-drehetra. Hividy tapakila ho an'ny fiaran-dalamby izay mitaingina na dia amin'ny fotoana ny manondro amin'ny Save A Train ary manomboka nankafy Eoropa.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na azonao atao eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/europe-luxurious-trains/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#lafo #tarehy #traveleurope luxurytrain Train Travel fiaran-dalamby nankany